Uthando Luwela Imingcele Ebekwe Abantu Ezweni LaseGeorgia
ENGAKAZALWA uSanel, odokotela batshela abazali bakhe ukuthi uma engafanga ngenkathi ebelethwa wayezoba nezinkinga ezinkulu zempilo. Kusukela ngosuku lokuqala ezelwe kwadingeka ukuba ahlinzwe. Abazali bakaSanel ababehlala e-Abkhazia—okuyisifunda esasingekho ngaphansi kweGeorgia—abakwazanga ukuthola udokotela owayengamhlinza ngaphandle kokumfakela igazi.
Abazali bakhe baxhumana neKomiti Yokubonisana Nezibhedlela (HLC). * Bajabula kakhulu lapho abazalwane abasebenza kule komiti bethola udokotela waseTbilisi, inhloko-dolobha yeGeorgia, owavuma ukumhlinza. Kodwa unina wayengakabi namandla ngokwanele ukuba angakwazi ukuya lapho uSanel ayezohlinzelwa khona. Ngakho kwanqunywa ukuthi kube ogogo bakaSanel, bobabili ababengoFakazi, abazoya naye esibhedlela eTbilisi.
Lokhu kuhlinza okwakubucayi kwaphumelela. Ngokushesha ngemva kwalokho kuhlinzwa, ogogo bakaSanel babhala: “Sahlala esibhedlela izinsuku ezingaphezu kwezingu-20. Phakathi naleso sikhathi, savakashelwa abazalwane nodade abaningi baseGeorgia befuna ukusisiza. Baningi abasitshela ukuthi babezwelana nathi. Sasike sifunde ngothando oluboniswa abazalwane esikanye nabo kodwa manje silubone mathupha.”
^ isig. 4 Abadala baseGeorgia abakhonza emaKomitini Okubonisana Nezibhedlela sebethole odokotela abangaphezu kuka-250 abavuma ukuhlinza iziguli ngaphandle kokusebenzisa igazi.
Kunemibono eminingi eyiphutha ngoFakazi BakaJehova nangokumpontshelwa igazi. Funda amaqiniso ngezinkolelo zethu kule ndaba.